Waalid ahaan waxaad xaq ku lahaan kartaa, in ubadkaaga aad guriga ku daryeesho oona gunno lagu siiyo. Guunnada xilliga fasaxa waalidiinta waxaa loo yaqaanno [föräldrapenning] waxaana bixiso Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Lacagta waalidiinta [Föräldrapenningen] waa qayb kamid ah caymisyada waalidiinta ee dalka Iswiidan ka hirgaleen, waxaana xaq ku leh hooyoyinka iyo aabeyaasha ba.
Warbixin dheeraad oo ku saabsan lacagta waalidiinta ka aqriso barta internetka Försäkringskassan (Försäkringskassans webbplats)
Lacagta hawl-gabka waa lacagta aad ku noolaanayso maalinta aad joojiso inaad shaqayso. Lacagtaada hawl-gabka waxay badanaaba ka koobantahay saddex qaybood – lacagta hawl-gabka ee guud, lacagta hawl-gabka ee shaqada iyo wixi ahaan kara kayd la dhigta. Marka aad qaadato fasax waalidnimo waxay raad ku yeelan kartaa dakhliga iyo lacagtaada hawl-gabka. Lacagta guud ee hawl-gabka waa lacag hawl-gab dawladeed taas oo Hey'ada Lacagaha Hawl-gabku ay mas'uul ka tahay. Waxaad xaq u leedahay inaad qaadato lacagta hawl-gabka ee guud xilliga da'da 62 sano, laakiin waxaad xitaa dooran kartaa inaad shaqayso ilaa inta aad noqonayso 68 sano.